Izinto ezisibhozo zase China iiglavu zokukhusela iikhemikhali kunye namanqaku ngokweenkcukacha abavelisi kunye nabathengisi Joysun
Iiglavu zokukhusela imichiza
Yinxalenye ebalulekileyo yemveliso yemichiza kwaye inokukhusela impilo yabasebenzi. Abantu abaninzi bayazi iiglavu zokukhusela imichiza, kodwa abazi ngokwaneleyo ngayo. Nazi iintlobo ezisibhozo zezixhobo zeglavu zokukhusela iikhemikhali, kunye nenkcazo emfutshane yokuqonda kwazo okuhambelana
Iyokuqala: i-latex yendalo
Ngokubanzi, i-latex yendalo inokhuselo olungcono kwizisombululo zolwelo, ezinjengeasidi kunye nezisombululo ezinamandla zealkali. Izibonelelo zalo kukuthuthuzela, ukuqina okuhle kunye nokusetyenziswa okuguqukayo.
Uhlobo lwesibini: iNitrile
Inezinto ezintle zokuzikhusela ngokuchasene neoyile, igrisi, iimveliso zepetrochemical, izinto zokuthambisa kunye nezinto ezahlukeneyo zokunyibilikisa. Nangona kunjalo, ukudumba kunokubakho kwezinye izinyibilikisi, ezichaphazela iipropathi zomzimba kunye nokunciphisa ukhuseleko.
Uhlobo lwesithathu: Polyvinyl chloride (PVC)
Inefuthe elikhuselayo kwinani elikhulu lezinto zamachiza ezinyibilikayo emanzini, ezinjengeeasidi kunye neealkali, kodwa ayinako ukukhusela izinto eziphilayo ezinje ngezixazululo, kuba izinyibilikisi ezininzi ziya kunyibilikisa iiplasticizers ezikuzo, ezingazukubangela ungcoliseko kuphela, kodwa kunciphise kakhulu umsebenzi wokuthintela iiglavu.
Iphantse yalungela njengerabha yendalo. Inokhuselo olulungileyo kwiimveliso zepetrokhemical kunye nezinto zokuthambisa, inokumelana ne-ozone kunye nemitha ye-ultraviolet, kwaye ineempawu zokulwa ukuguga ezomeleleyo.
Okwesihlanu: polyvinyl utywala:
Inesiphumo esihle sokhuselo kwizinyibilikisi ezininzi eziphilayo, kodwa inyibilika ngokulula emanzini, kwaye ukusebenza kwayo kuya kuncitshiswa emva kokudibana namanzi, kwaye izinto zinzima kwaye aziphazamisi.
Okwesithandathu: irabha yokwenziwa kwebutyl
Inesiphumo esihle sokukhusela iikhompawundi eziphilayo kunye neeacidi ezomeleleyo. Kunzima ukuvelisa kunye nenkqubo. Iphantse ayinaziphumo zokukhusela ioyile kunye namafutha, kodwa inezinto ezintle zokukhusela kwiigesi.
Eyesixhenxe: Irabha yeFluorine
I-polymer ene-Fluorinated, i-substrate iyafana neTeflon (polytetrafluoroethylene), kunye namandla ayo okuvula umphezulu asezantsi, ke amathontsi awayi kuhlala ngaphezulu, anokuthintela ukungena kweekhemikhali. Iluncedo kakhulu kwizinyibilikisi ezinee-chlorine kunye neehydrocarbon ezinamakha. Iziphumo ezilungileyo zokukhusela.
Isibhozo: I-polyethylene yeChlorosulfonated:
Inezinto ezikhuselayo kwizinto ezininzi zeekhemikhali, inokukhusela i-alkalis, i-oyile, i-fuels kunye ne-solvents ezininzi, kwaye inokumelana nokushisa okuphezulu kunye nokushisa okuphantsi, ukunxiba ukuxhathisa, ukuxhathisa ukuxhathisa njalo njalo.
Ezona zisetyenziswa ngokuxhaphakileyo zi-latex yendalo, i-butyronitrile, kunye ne-polyvinyl chloride (i-PVC) yokwahlula ii-cove zeglavu.